Mianara Origami sy Origami miaraka amin'ny loharanon-karena tsara indrindra - Ikkaro
Origami… fiaramanidina taratasy ary tarehimarika tsy azo atao maro.
Ny vice aza.
Hatramin'ny fahazazako dia liana amin'ny Origami aho na ny kanton'ny Origami. Tsaroako ny fomba nanamboarako fiaramanidina taratasy, sambo ary tanky ho an'ny tafiko. Tamin'izaho mbola kely dia tiako izany.
Saingy tsy miresaka olana sarotra fotsiny isika. Tianay haseho fa ny Origami dia mety ho tena mora sy mety ho an'ireo ankizy kely ao an-trano. Mitady origami ho an'ny ankizy? Manomana ilay faritra aho mba hahafahan'ny zanakareo manao sary am-polony tsikelikely.
Fiaramanidina taratasy, sambo, ary biby ankoatry ny maro hafa.
Heveriko fa fiaramanidina taratasy Tokony ho, miaraka amin'ny fatorana tsipika, no iray amin'ireo voalohany raha tsy ny fifandraisana voalohany amin'ny olona manana Origami. Raha liana ianao, dia afaka manao karazana fiaramanidina taratasy am-polony maro, ary gaga ny ankizy rehefa manontany anao izy ireo hanao izany. Nanomboka tamin'ny fiaramanidina aho ary nanao karazana fiaramanidina taratasy maro.
Ny iray amin'ireo fahalemeko, na dia tsy dia niasa firy aza, dia biby an-taratasy.
Toy ny mahazatra dia misy lafiny maro misokatra amin'ny fikarohana sy fianarana. Fampahalalana marobe tokony haseho anao ao amin'ny bilaogy ary mankafy azy toa ahy ianao.
Raha mitady kalandrie ho an'ny latabatrao amin'ny taona 2018, tsara sy mora ary mora manangana tsy misy toa an'ireo môdely azo pirinty hanaovana dodecahedrons ireo. Araka ny efa noeritreretinao dia misy endrika 12 amin'ny polygon mahazatra, iray isam-bolana :) Tamin'ny androny dia niresaka momba izany isika kalandriaka mandrakizay, izay safidy tsara hafa hanamboarana tsara amin'ny hazo, taratasy na baoritra.
Ny maodelin'ireo fiangonana ao amin'ity lahatsoratra ity dia natao manaraka ireto fitaovana an-tserasera, tena intuitive ary mora ampiasaina. Momba ny a mpanamboatra kalandrie dodecahedron.
Tsotra be izy io. Misafidy ireo karazana dodecahedra roa arosony ianao, ny taona amin'ny kalandrie, fiteny, raha tianao ny hisehoan'ny isa isa na tsia sy ny endrika vokariny, izay mety PDF na lahatsoratra na sintonina.
Ahoana ny fomba fanaovana snowflakes Star Wars
Ho hafa ity Krismasy ity, azoko mazava tsara. Ho ahy irery ny haingo Krismasy ao an-trano. ... Tohizo ny famakiana
Ho an'ny tia origami na Origami dia mitondra programa maimaimpoana 3 izahay izay miaraka amina fanazaran-tena kely dia hitondra anao any amin'ny ambaratonga hafa ... zavatra toa izany Origami Jedi
Ny bitro teo aloha dia santionany amin'ny zavatra azo tratrarina.
Ahoana ny fomba fanaovana glider taratasy
iray hafa fiaramanidina bebe kokoa ho an'ny fanangonana fiaramanidina taratasy izay ataonay.
Tsotra izany glider vita amin'ny taratasy.
Ahoana ny fomba hanaovana pinwheel taratasy
Tena fototra sy mahitsy, fa mieritreritra ny Origami na Origami tsy maintsy toy ny manao pinwheel.
Ity sary ity dia mamintina azy,
Sary nalaina avy tamin'ny Ny tontolon'i Paliku
Fomba fanamboarana foza taratasy
Efa elaela izay no nanaovanay hetsika Origami, ka anio mitondra anao izahay ny fomba fanaovana foza taratasy. Karazana modely foza roa no tena ahitantsika. Safidio ilay tianao indrindra. Mamela horonan-tsary maromaro aho
[nasongadina] Nohavaozina. Novako ny horonan-tsary tany am-boalohany izay navoakako tamin'ny 2010. Betsaka kokoa ny horonantsary tsara kokoa androany, ary mifanitsy amin'ny karazana foza taratasy samy hafa izy ireo. Ka nanavao ilay lahatsoratra tamina olom-bitsy tiako aho. Ankafizo izy ireo [/ nasongadina]
Saingy mampitandrina anao aho fa ny haavon'ity hetsika ity dia avo lenta, koa aza kivy ;-) Ao amin'ny horonan-tsary dia azonao atao ny mahita ny tsipiriany tsikelikely amin'ny fandefasana azy. Raha tafiditra ao ianao na tsy manana dingana mazava dia azonao ajanona ilay horonan-tsary. Tena fanampiana lehibe izany.
Ahoana ny fomba hanaovana angidimby taratasy an-trano
Mihoatra ny angidimby heveriko fa autogyro taratasy. Saingy faly aho. Azontsika atao ny milaza fa mifototra amin'ny voan'ny maples izany, saingy efa izany ny eritreritro.
New Guinness firaketana ho an'ny sidina ny fiaramanidina taratasy
Ny fidirana nohavaozina tamin'ny 27-11-2017 dia manampy firaketana vaovao tratra tamin'ny sidina fiaramanidina taratasy aho tato anatin'izay taona izay. Firaketana ny ... Tohizo ny famakiana
Ahoana ny fomba fanaovana boomerang taratasy
Horonan-tsary telo hampianarana ny fomba fanaovana boomerang taratasy kely.
Tsotra be, nefa mandeha, na dia tsy maintsy mampitandrina aza aho fa sarotra ny mitady fomba hanariana azy mba hiverenany. Aza manantena valiny toy ny an'ny boomerangs hazo na dokam-barotra hafa, fa toy ny lalao ankolaka amin'ny fivoriana na milalao ny ankizy dia tena tsara.
Nahatratra 30 - 40 cm teo ho eo aho. Azonao atao ny manandrana azy hahitana raha maharesy azy io ;-)
Mamela anao horonantsary maromaro hafa aho, na dia miaraka amin'izy ireo aza dia ho ampy, satria tsotra be ny hetsika fampiharana, na dia tsy dia be loatra aza ny mahazo ny boomerang taratasy miverina aminao.
Efa nasehonay ny fomba fanaovana maodely fiaramanidina taratasy, sambo ary tanky ho an'ny tafikay. Miaraka amin'ireo rehetra ireo ... Tohizo ny famakiana